Adeegyada - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
adeegyada Waxaan Bixinaa
Waxaan bixinnaa adeegyo kala duwan oo buuxa si aan uga caawino ururrada inay si wanaagsan u shaqeeyaan. Dad aad u tiro yar ayaa sidan sameeya, oo midkoodna ma samayn tan iyo intii aannu samaynay.
Bal qiyaas gurigaaga oo kula hadlaya adiga ama baabuurkaaga. Albaabka la hadlaya furayaasha iftiinka. Weyn! Miyaanay ahayn?
Waxaan soo saarnaa barnaamijyo Webka oo kala duwan oo si karti leh u xallin kara dhibaatooyin kala duwan sida loogu baahan yahay.
iPhone, iPad, Android, Facebook & Customizes Google Apps horumarinta dalabka
Aad bay ugu weyn tahay qayb kasta haddii ay tahay daryeelka caafimaadka, waxbarashada, maaliyadda, saarka, IWM
ML waa ku -dhaqanka falanqaynta xogta oo farsameysa dhismaha tusaalaha gorfaynta.
HABEENKA AFKA HIDDA
Laanta Sirdoonka Artificial wuxuu ka hadlayaa curinta, fahamka & falanqaynta afafka.
Ogaanshaha Qiyaanada, Dhimista Kharashka iyo Bixinta Fiican iyadoo la kaashanayo Big Analytics Xogta.
Bixinta Socdaallada Socda Adeegyada, Adeegyada Marti -gelinta Daruuraha iyo IaaS/ PaaS.
La falgalaan jawiga dhijitaalka ah ee dhabta ah iyo sidoo kale abuurista jilitaanka nolosha dhabta ah
Xaqiiqda La Aasaasay
Wuxuu ku abuuraa jawi noocaas ah arjiga dhexdiisa oo uu ku dhex milmo waxyaabaha dhabta ah ee adduunka.
Kordhinta wareejinta iibka, Kordhi heerka jawaabta ololaha, Yaree kharashka suuqgeynta.
ADEEGYADA AMAZON WEB
Adeegyada Shabakadda Amazon, oo bixisa Platform Services Cloud oo dhammaystiran.
Sayniska xogta iyo stats ee dhisa cabbirrada adduunka kugu xeeran si aad u hesho aragtiyo macno leh oo ku aaddan isbeddellada iyo isku xirnaanta. Mawduuca xiisaha baaxadda leh ee fiditaanka weyn falanqaynta xogta qalab siinaya awoodda dib -u -dhiska qaababka marka la isu geeyo xogta aan habeysanayn.
sirdoonka macmal waa sirdoon lagu muujiyey mashiinno, si ka duwan sirdoonka dabiiciga ah ee ay muujiyeen bini -aadamka iyo xayawaanku, oo ku lug leh miyir -qabka iyo shucuurta. Farqiga u dhexeeya qaybihii hore iyo kan dambe ayaa inta badan lagu muujiyaa soo gaabinta la doortay.
Barashada algorithms -ka kombiyuutarka oo si otomaatig ah u hagaajinaya khibrad & adeegsiga xogta. Algorithms -ka waxaa loo adeegsadaa codsiyo kala duwan, sida shaandhaynta emaylka & aragga kombiyuutarka, halkaas oo ay adag tahay ama aan macquul ahayn in la sameeyo algorithms -ka caadiga ah si loo qabto hawlo.
warbaahinta bulshada waxay siisaa madal weyn oo loogu talagalay xirfadlayaasha si ay ula falgalaan dhagaystayaashooda iyo macaamiishooda. Adigoo isticmaalaya qalabka saxda ah iyo farsamooyinka bulshada, waxaad kobcin kartaa soo-socod weyn oo aad noqotid shakhsiyad warshadeed oo habboon.
Mid ka mid ah teknolojiyada ugu muhiimsan tobankaan sano waa Barashada Barafka. Daruuraha ayaa u suurtogeliya ganacsiyada inay bixiyaan adeegyo kala duwan marka la dalbado, waxayna sidoo kale u oggolaadaan dadka isticmaala internetka inay helaan adeegyadan iyagoon iibsan qalab cusub.
Aaladaha iibku waxay la socon karaan horumarkaaga waxayna ku siin karaan cabbir isla xisaabtan oo kuu oggolaanaya inaad noqoto mid wax soo saar leh. Adigoo si otomaatig ah u qoraya qoraalladaada, waxaad kordhin kartaa xawaaraha aad ku xirto heshiisyada. Hubi in dhuumahaagu si otomaatig ah u yahay, ka dibna hubi inta badan.
Blockchain waa teknolojiyad kacaan oo fududeyn karta macaamil ganacsi oo aad u ammaan badan. Waqtigan xaadirka ah, heerka ay dadku wax ku iibsadaan onlaynka ayaa kor u kacaya, tanina waxay horseedday kororka bots -ka iyo spamming -ka mareegaha.
AUTOMATION HABKA ROBOTIC
Qalabaynta hawlaha ku salaysan xeerka iyada oo la adeegsanayo xalalka softiweer casri ah si loo yareeyo ku tiirsanaanta aadanaha ee shaqada caadiga ah. Maareynta keydka macluumaadka ee CRMs, ERPs, Taageerada Macmiilka iyada oo aan la socon.
Iyada oo ku sarraysa warshadaha farsamada barnaamijyadeeda aadka loo qiimeeyo, chatbots-ku waa wakiilo wada hadal caqli leh oo la falgalaya aadanaha. Waxaan wax u qaadnaa tallaabo hore iyadoo aan horumarinayno bots -yadeeda, oo si gaar ah loogu talagalay dhammaan warshadaha.